Indlela yokwenza oonobumba be-gothic: Isifundo esifutshane esicacisayo | Abadali be-Intanethi
Umthombo: Envato Elements
Ukuyila iindlela zokubhala namhlanje sesinye sezigaba ezibandakanyiweyo kwihlabathi loyilo lwegraphic. Yiyo loo nto sifumana iifonti zazo zonke iintlobo, ezineserifs ezinde, i-sans-serifs, imijikelo yejometri, njl.
Namhlanje sikuphathele isitayile sokuchwetheza esingazalwanga namhlanje, kodwa sisebenze iminyaka emininzi kwaye namhlanje sikwazile ukwenza izinto zangoku kwaye sibe ngumdlali ophambili kwiilebhile ze-albhamu yomculo, iipowusta kunye neemenyu zokutyela, Ewe, sithetha ngeefonti zeGothic.
Kule post, sichaza indlela yokuyila ukuze wenze iiprojekthi ezinkulu.
1 i-gothic typography
2 Uyilwa njani i-Gothic Typefaces: Isifundo
2.3 Ezinye iifom
3 abaqulunqi bombhalo
3.1 UMarian Bantjes
3.2 umhlophe noh
3.3 Veronika Buryan
Iintlobo zochwethezo zeGothic, ezaziwa ngokuba ziqhekeziwe okanye ziqhekeziwe, zisekelwe kwi-calligraphy yamaxesha aphakathi, oko kukuthi, zivela kumaxesha aphakathi kwaye ziphuma kwi-alfabhethi yesiLatini. Zaqalisa ukusetyenziswa ekuhambeni kwexesha yaye iBhayibhile kaGutenberg enemigca engama-42 ibalasele, iguqukela ekubeni kuchwethezwe lwale mihla: iFraktur, eyasetyenziswa ukubhala imibhalo yesiJamani ukususela ngenkulungwane ye-1941 de uHitler wakuvala ukusetyenziswa kwayo ngowe-XNUMX. Okwangoku uninzi lwabayili beentlobo benza uhlobo olutsha lohlobo olusuka kuhlobo oludala lwe-gothic.
Iimpawu ezisesikweni zolu sapho lokuchwetheza zezi:
Imivumbo etyebileyo ethe tye nathe nkqo
Imivumbo ye-oblique encinci kwaye ityhafile
Imivumbo emifutshane yokunyuka nokuhla
Iifoto ezicokisekileyo kakhulu
Konke oku kwenza i-Gothic typefaces iifonti ngokubanzi kunye ne-calligraphic ductus, oko kukuthi, kunzima ngakumbi ukubhala nge-calligraphically.
Ngokuphathelele ukusetyenziswa, sinokuqinisekisa ukuba zisetyenziswe kuyilo olubalulekileyo lwembali, ngale ndlela, sinokuzifumana izitrato ezindala, itshizi okanye iibhiskithi ukupakishwa nakwintaphane yeziselo ezinesiko lembali, njengeebhiya.
Grotesque: Ngenxa yobungqwabalala kunye nokufuna ukwazi, kwakusekuqaleni kwenkulungwane ye-XNUMX apho amaGothic aqala ukwaziwa njenge. grotesque. Nangona ekuqaleni kwakufuneka bahlukane nembali ngenxa yamandla amakhulu ama-doonas kunye nama-meccans ayenawo ngexesha labo. Iimpawu zakhe zimxinwa kwaye ukubetha kwakhe ku-homogeneous. U-"g" wakhe unobude obubini kunye ne-"G" yesilevu sakhe, ngokungafaniyo ne-grotesque. Okunye okuqaphelekayo bubude buka x onobumba abancinci, obudlala ngokukhetha olu hlobo loonobumba xa ushicilelo kufuneka lube kwimizimba emincinci.
Neogrotesque: Njengoko sele sitshilo, kwiminyaka yee-XNUMX, inkqubo yatshintshwa kwaye abafazi beGothic abakhatywayo bavuselelwa. Ubulula kunye nokuthe tye kwee-grotesques zenze ukuba zibe zezona zilungelelaniswa kakhulu kwixesha elitsha lobuchwepheshe elaliza. Kodwa ii-grotesques zazicingelwa kancinci, zazisengama-meccans ngaphandle kwe-serif, yiyo loo nto abachwethezi baqala ukwenza ulwakhiwo olucwangcisiweyo ngakumbi, kunye nemivumbo eyongezelelekileyo: i-neogrotesques. Sinokuthi ubuqaqawuli obukhulu be-neogrotesques, siyifumana kwi-typography yaseSwitzerland emva kweMfazwe yesibini yeHlabathi. Siyayazi iHelvetica Neue.
Ijometri: Olu hlobo lweGothic lubonakala lulandelwa ngerula kunye nekhampasi. Iintlobo zochwethezo ezithe ngqo nezingqukuva, ezicingayo, eziphantse zibe zezezibalo. Ziye zaqwalaselwa kwiminyaka yamashumi amabini, ixesha lokusebenza kunye nesikolo saseBauhaus. Siyahlula ngokujikeleza kwe "o", ukungabikho kwe-chin ye "G" kwaye ngokubanzi ngenxa yokuba zibonakala zenziwe ngesikwere, i-bevel kunye nekhampasi. Kumatyeli amaninzi sifumana u-"a" esenza, ngokulandelelana, umjikelo, ofana kakhulu no "d" okanye "o".
Abantu: I-Gothic yamandulo ye-Humanist iphuma kwi-calligraphic script kunye ne-classical capital capital njenge roman kunye nonobumba abancinci njengamagama abhalwe ngobuntu. Ngokuqhelekileyo ziboniswa kuthi ngobunzima be-asymmetrical kumakhonkco abo kunye neziphelo ze-angular. Njengee-grotesques, bano "g" wobude obubini, kodwa ngokungafaniyo naba baswele isilevu ku "G". I-arc esezantsi ye "e" ikhomba ekunene. Ngamafutshane, baya kuba ngamaRoma ngaphandle kokugqibela.
Uyilwa njani i-Gothic Typefaces: Isifundo
Emva kolwazi olufutshane malunga neefonti zeGothic, siza kuchaza inyathelo nenyathelo ukuba ziyilwa njani na. Kuya kufuneka ulandele la manyathelo esikubonisa wona ngezantsi kwaye uya kuba yingcali yeefonti.
Ukugqiba esi sifundo, kufuneka ube nekhamera kunye nenkqubo yokuhlela ekufutshane. Sikwacebisa ukuba ujonge nayiphi na into enokuthi iqulathe esi simbo sokuchwetheza: amaphephandaba, iimagazini, imizobo, njl.
Ukusebenzisa ikhamera yedijithali okanye iskena, thatha iifoto zedijithali zamaxwebhu ukuba ufumene oonobumba be-gothic. Kule meko kuya kufuneka uhlele, ukuzenza zikhulu, oonobumba abanenkqubo yokuhlela.
Shicilela umfanekiso, ungayenza ngomshicileli wakho okanye kwivenkile yokukhuphela ukuze bakuprintele yona, ukuba ufuna ivinyl ungayiprinta ngokuthe ngqo kweli phepha uze uyincamathisele naphi na apho ufuna khona. Unokuguqula kwakhona uyilo lwakho kwi-tattoo ye-gothic, kumfanekiso ongezantsi unomzekelo.
Shicilela umfanekiso, ungayenza ngomshicileli wakho okanye uye kwivenkile yokukhuphela ukuze bakuprintele yona, ewe. ufuna ivinyl ungayiprinta ngqo kweli phepha uze ulincamathisele naphi na apho ufuna khona. Nawe unako guqula uyilo lwakho ube tattoo yegothicKumfanekiso osekhohlo unomzekelo.
Ukuba into oyifunayo kukumangalisa abahlobo bakho ngokubhala amagama abo ngoonobumba beGothic, into ekufuneka uyenzile ukuze ufunde i-calligraphy kukulanda oonobumba kwaye ubaphinde amaxesha ambalwa, emva koko uya ukulungele ukubhala igama lakho okanye into oyifunayo ngoonobumba be-gothic.
Unokukhuphela kwakhona ialfabhethi yegothic. Khuphela umfanekiso kwaye uwuprinte unokwenza ikholaji ngoonobumba be-gothic. Kweminye imifanekiso ungasebenzisa amanani e-gothic, ngosuku lwakho lokuzalwa okanye itheko le-Halloween.
Wuvavanye umsebenzi wakho ngokuwungqiyama ngodonga kwaye uwujonge kumgama ozimitha ezi-10 ubuncinane.. Kwakhona, gcina isibuko phambi komsebenzi wakho kwaye ujonge kwisibuko. Oku kuya kwenza amagama afundeke nzima, nto leyo enyanzela ingqondo ukuba igxininise kwiimpawu zobugcisa zamagama, ezifana nokuqamba kwawo, ukulungelelana nokuvisisana. Bhala phantsi iimpembelelo zomsebenzi wakho ngexesha lovavanyo. Umzekelo, ungabhala: "Iipunchlines azimi ngokwaneleyo."
Hlaziya umzobo ngokusekelwe kumanqaku owenze kwisinyathelo sangaphambili. Phinda le nkqubo yokuzigxeka kunye nokuhlaziya ude waneliseke ngumfanekiso wakho wegama.
Umthombo: Ipsoideas Agency
Nalu uluhlu lwabanye abaqulunqi bezona zilungileyo zokuchwetheza ukugcina uphefumlelwe. Ezinye zazo uya kuzazi kwaye ezinye uya kuzifumanisa.
Ngokuqhelekileyo uchazwa njenge-typographer, umyili, umzobi kunye nombhali. Ukusebenza kwisiseko sakhe kwisiqithi esincinci esikuNxweme oluseNtshona lwaseCanada, umzobo wakhe, ubuqu, uxakeke kwaye ngamanye amaxesha umsebenzi ongaqhelekanga wenze ukuba aqondwe kwihlabathi liphela. Ukulandela umdla wakhe wokuntsonkotha kunye nolwakhiwo, uMarian waziwa ngobuchwephesha bakhe besiko, ubugcisa bakhe obuneenkcukacha kunye nobuchanekileyo be-vector, umsebenzi wakhe wezandla othe kratya, kunye. isakhono sakhe ngeetemplates kunye nezihombiso.
Ungumzobo ozimeleyo kunye nomyili wohlobo olusekwe e-Barcelona, ​​​​isixeko apho akhulele khona nalapho wafunda khona uyilo lwegraphic e-Bau, Centre Universitari de Disseny. Emva koko wathatha i-Master's kwi-Advanced Typography e-Eina, apho waqala khona ukulinga ngoyilo lohlobo.
Ukusukela ngo-2008 usebenze njengomyili wegraphic kwizitudiyo ezahlukeneyo eBarcelona de ngo-2010 wagqiba kwelokuba afudukele eNetherlands. Kulapho kwi-2011 wafunda i-Master Type kunye neMedia kwi-KABK eHague.
Ngoku usebenza ngokuzimeleyo kubathengi abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi kwaye ufundisa iiklasi zokuchwetheza eBau. Phakathi kweeprojekthi zakhe zamva nje, kufanelekile ukugqamisa i intsebenziswano ayenzele Underware, Jordi Embodas.
Ungumyili oye waphila kwaye Yenziwe kwizixeko ezingafaniyo njengeMunich, iVienna neMilan. Kungekudala igama lalo hlobo kunye nomlingiswa woyilo lomlinganiso uye waba yinxalenye yeqela elikhethiweyo le-53 typographers ekhethwe yi-Association Typographique Internationale (ATypI) ngaphakathi kwesibini seLetter 2 ukhuphiswano loyilo lwamazwe ngamazwe.
I-Maiola typeface, eyaqala ukuyilwa nguBurian ngo-2003 kwaye yapapashwa ngo-2005 kwi-TypeTogether, inoxanduva lokungena kwayo kule klabhu apho kuphela ukugqwesa koyilo lwetypographic kufanelekile.
Ungumyili wegraphic kunye nomchwethezi, usebenza e-Barcelona, ​​​​lapho wazalelwa khona ngo-1968. Unayo isiseko sakhe, i-Type-Ø-Tones. Ukwaziwa ngokuba ngutitshala wokuchwetheza e-Eina, e-Elisava kwaye ufundisa iindibano zocweyo kulo lonke elaseSpain. Inamabhaso amabini e-Laus kunye neZatifikethi ezimbini ze-Typographic Excellence kunye ne-Letter.2 ibhaso evela kwi-AtypI.
Ungumbhali weTypoMag, ukuchwetheza kwiimagazini kunye nombhali-ndawonye wencwadi ethi "Uyenza njani i-typefaces". Ukusuka kumzobo ukuya kwiscreen, kunye noCristóbal Henestrosa kunye noJosé Scaglione.
Siyathemba ukuba uya kuqhubeka uyila ezinye iindlela zokuchwetheza ezininzi kwaye uphefumlelwe kwaye wafunda. Ukongeza, unokundwendwela amanqaku athile esikubhalele wona kwaye apho unokuqhubeka nokufunda ngakumbi malunga neefonti.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uzenza njani iileta zegothic